Dude, ဘယ်မှာငါ၏အ flannel လား ကျွန်မအနည်းငယ် grungy ခံစားတယ်! (ထုတ်လုပ်) - Djs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, Vjs, နိုက်ကလပ် 2019
SKU: #70 - DJ သမား 58 ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် အမျိုးအစား: DJ သမား drop
Dude, ဘယ်မှာငါ၏အ flannel လား ကျွန်မအနည်းငယ် grungy ခံစားတယ်! (ထုတ်လုပ်)
ကလေးတွေတလျှောက်ရွှေ့, တလျှောက်ရွှေ့! (ထုတ်လုပ်)
သငျသညျ ... ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင်သွားပါကအဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံးလိုင်းကခုန်၏မရပ်မနားရောနှောဟုမေး! (ထုတ်လုပ်)